Jiny : Fahasamihafan'ny versiona roa - Wikipedia
Jiny : Fahasamihafan'ny versiona roa
Endrik'io pejy io tamin'ny 24 Aprily 2018 à 15:19
5 156 octets ajoutés , il y a 3 ans
Endrik'io pejy io tamin'ny 24 Aprily 2018 à 12:31 (hanova)
Endrik'io pejy io tamin'ny 24 Aprily 2018 à 15:19 (hanova) (esory)
Ny teny hoe ''jiny'' dia fanagasiana ny teny arabo hoe جِنّ / ''jinn'' (atao hoe جِنّي / ''jinnī'' io teny io raha milaza marotokana).
Ny teny hoe arabo hoe ''jinn'' dia avy amin'ny fototeny semitika hoe ''jnn'' (teny arabo: جَنّ / جُنّ‎, ''jann'') -, izay midika voalohany hoe "miery" na "manafina". Ny mpikaroka sasany dia mihevitra fa io teny io dia midika ara-bakiteny hoe "zavatra afenina amin'ny fahatsapana". Iray tarika amin'ny teny arabo hoe ''majnūn'' (izay midika hoe "itoeran-javatra" na "adala") - ''jannah'' ("zaridaina") ary ''janīn'' ("zaza am-bohoka"). Ny teny hoe ''jinn'' dia ampiasaina amin'ny fiteny arabo ho milaza maro ka ny endriny milaza tokana dia ''jinni''.
Tsy fantatra mazava ny niavian'ny teny hoe jinn. Ny mpikaroka sasany dia mampifandray an'io teny io amin'ny teny latina hoe ''genius,'' - vokatry ny fampifangaroam-pivavahana tamin'ny andron'ny Empira romana tamin'ny nanjakan'i Tiberio Aogosto -, nefa izany fisampana-teny izany dia iadian-kevitra.
Misy koa ny milaza fa ny teny hoe jinn dia avy amin'ny teny arameana hoe ginnaya (siriaka: ܓܢܬܐ‎) izay midika hoe "andriamanitra mpiaro" na "mpiambina". Ny hafa koa dia milaza fa avy amin'ny anaran'ny fanahy vavy ao amin'ny Avesta (finoana persiana) hoe ''Jaini'' io teny io izay isan'ny zavaboary maro ao amin'ny finoana efa tany alohan'ny anganom-pinoana zoroastrisma tany Iràna.
Ho an'ireo miozolmana - ny jiny dia zavaboary miaina ety an-tany izay monina eny akaikin'ny toerana misy rano, any amin'ny tany efitra sy eny amin'ny fasana sy any anaty ala. misy dimy ambin'ny folo any ho any ny karazana jiny (2)
Ao amin'ny fivavahana silamo - ny jiny dia zavaboary manana fahefana mihoatra ny an'ny zavaboary mahazatra - fifangaroan'ny hazavan'ny afo tsy hita maso sy afo tsy misy setroka no nanamboarana azy fa tsy tahaka ny olombelona izay namboarina tamin'ny tanimanga. Asaina mivavaka sy mino izy ireo ka tsy maintsy hisedra ny Fitsarana Farany.
"Ary rehefa notetenintsika ny Anjely hoe: "mandohaleha eo anatrehan'i Adama ianareo" - dia nandohalika izy ireo - afa-tsy i Iblisy izay isan'ireo jiny sady izay niodina tamin'ny didin'ny Tompony" (Koràna 18.50).
"Tsara noho izy aho : noforoninao tamin'ny afo aho - fa izy kosa noforoninao tamin'ny tanimanga" (Sorata 38.76)
Ny anjely dia izay noforonina tamin'ny hazavana sady tsy manao afa-tsy izay ampanaovin'Andriamanitra azy ary tsy mahalala manota; ny jiny (sahala amin'ny olombelona) kosa dia afaka ny tsy hanoa an'Andriamanitra sy afaka manota:
"Ary eo ntrehan'Andriavanitra no andohalehan'ny zava-manan'aina rehetra any an-danitra sy ety an-tany; sahala amin'izany koa ny anjely izay tsy mibontsin'ny avonavona." (Sorata 16.4)
"Ireo izay eo akaikin'ny Tomponao (ny anjely) dia mihira ho an'ny Voninahiny andro aman'alina tsy mahatsiaro fahasorenana." (Sorata 41.38)
"Ianareo izay nino! Arovy ny tenanareo sy ny ankohonanareo amin'ny afo izay hosoronana amin'ireo olona sy vato - hambenan'ny anjely masiaka sy sarotiny izay tsy mahay tsy manaja an'i Allah amin'izay anirahany azy sady manatanteraka izay andidiana azy." (Sourate 66.6)
"<sup>19</sup>Azy irery ireo rehetra ao an-danitra sy ety an-tany. Ireo izay eo akaikiny [ny anjely] dia tsy mihevi-tena ho be voninahitra loatra ka tsy hidera Azy sady tsy reraka ny manao. <sup>20</sup>Mankalaza ny Voninahiny andro aman'alina sady tsy mitsahatra izy ireo." (Sorata 21.19-20)
Io fanan'ny jiny safidy io no nahafahan'i Satana tsy hanoa an'Andriamanitra sy ahafahana manasazy azy - araka ny voalaza ao amin'ny Koràna. Ny jiny dia mety hino an'Andriamanitra na tsy hino (Sorata Adh-Dhariyat 51.56)
Voalaza fa nisy jiny ratsy izay nanaraka foana ny mpaminany Mohamady izay niafara tamin'ny fiovam-po ka lasa jiny tsara talohan'ny nahafatesany vokatry nanarahany maso ny asan'i Mohamady.
Hita tao amin'ny "https://mg.wikipedia.org/wiki/Manokana:MobileDiff/815352"